Wax badan ka Ogow Qaraxyadii 11 September Ee Daaraha Mataanaha New York Warbixin
Monday September 11, 2017 - 22:01:25 in Wararka by Ali Adan
Maanta oo kale (Sept. 11) waxay ku beegan tahay 16-guuradii ka soo wareegtay Weerarkii loo adeegsaday Diyaaradaha Rakaabka ee la soo afduubtay ee bishii Sept. 11-dii ee sannadkii 2001-dii lagu burburiyey Daaraha Mataanaha ee Xarunta Hanacsiga Caalamiga (World Trade Center) oo ku yaalla magaalladda New York.
Hadaynu yara milicsano Dhacdada Sspt. 11, ee sannadkii 2001-kii waxaa la sheegay inay 19 Djallinyaro ka tirsan Ururka Alqaacida oo Tababar Duuliye Diyaarad lahaa si xoog leh ku qafaasheen 4 Diyaarado Rakaab oo ay u adeegsadeen Weerarkaas lagu hoobtay.
Kooxihii weerarkaasi fuliyey oo tiradooda dhamayd 19 qof oo 10 ka mid ka soo jeedeen Sacuudiga, halka kuwa kalena ka soo kala jeedeen dalalka Imaaraadka Carabta, Masar iyo Lubnaan.
Waxay isku qeybiyeen 4 koox, kuwaasi oo afduubtay 4 Diyaarad oo 2 ka mid ah lala beegsaday Tawarka Waqooyi iyo kan Koonfureed ee Daarihii Mataanaha ee Xaruntii Ganacsiga Caalamiga..
Sidoo kale, Hal Diyaarad ayaa lagu duqeeyey Dhismaha Gaashaandhigga Maraykanka ee The Pentagon-ka, halka midda kale la toogtay iyadoo aan gaarin dhismihii hadafka u ahaa.
Diyaaradahaasi waxaa 2 ka mid ah lahayd Shirkadda Diyaaradaha ee United Airlines iyo American Airlines.
Duqeyntaasi ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 2,995 qof, iyadoo in ka badan 6.000 oo kalena ku dhaawacmeen.
2,606 waxay ku geeriyootay Xaruntii Daaraha Mataanaha iyo deegaanadda ku xeeran, halka 125 kalena lagu dilay weerarkii lala beegsaday Xarunta dhexe ee Gaashaandhigga ee Pentoganka.
Haddaba, iyadoo aynu dul-mar kooban ku samaynay Dhacdadii September 11, ayaa waxaa soo baxay Caddaymo cusub oo lagu sheegay in Safaaradda Sacuudiga ku leeyihiin caasimadda Maraykanka ee Washington DC ku lug lahayd maalgelinta qaar ka mdi ah 19-kii qof ee fuliyey Weerarkii Diyaaradaha ee 16-sanno ka hor ka dhacay Mataykanka.
Wargeyska The Nork York Post ayaa maanta qoray Warbixin Cusub oo lagu sheegay in laga yaabo inay Safaaradda Sacuudiga ee Washington bixisay kharajkii Afduubayaasha u adeegsadeen Weerarkii Diyaaradaha ee Sept. 11.
Wargeyska ayaa qoray inay soo baxeen Caddaymo cusub oo muujinaya inay qoysaska ehelka la ah Kumaankii qof ee lagu dilay Weerarkii Sept. 11 doonayaan inay Dowladda Sacuudiga ku soo oogaan Dacwad kale.
[Daawo] Feysal Cali Waraabe oo ugu dambeeyn Farmaajo shir albaabada u xiran la yeeshay iyo muuqaalkii ruxay bulshadda
[Daawo] Oromadii oo ku dhaartay iney Somali leeynayaan si ay Somali Galbeed uga saaraan
[Daawo] heestii Alamdheh sida loo soo jilay
[Daawo] Shirweynahii ONLF ee Eritrea oo War murtiyeed adag ka soo baxay
[Dhageyso] Amiirka cusub ee Al-Shabaab oo sir culus shaaciyay iyo qiyaanadda Farmaajo -Ethiopia la damacsan yihiin Somalia ?
[Daawo] gabadh Midabkeeda quruxda badan ee Maariinka iska dhaqin oo heestii Beerkaan u seexdaa si qurux badan u soo qaaday
[DAAWO] SANJAY DUTT OO KUFSADEY 300 BOQOL OO GABDHOOD
[Daawo] seddex Nin oo Ogaadeena oo kun dollar lagu iibsaday Hargeysa kadibna Ethiopia ayaa loo dhiibay
[Cod sira Farmaajo] oo AA Warsame iyo Dahir Alasow shirqool iyo been abuur la damacsan
[Daawo] xulka heesaha ugu shidan sanadka 2018 iyo Fanaaniinta qaaday
[Daawo] ololaha qabiil ee diyaaradda Ocean iyo Video laga duubay maalintii la qafaalay Afhayeenka Galmudug
[Daawo] Hees Dhaanto Qalbidhagax dhashii boqorkow soo dhawoow